Roobab mahiigan ah oo ka da,ay xeryaha qaxootiga Dadab. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Roobab mahiigan ah oo ka da,ay xeryaha...
Roobab mahiigan ah oo ka da,ay xeryaha qaxootiga Dadab.
Xeryaha qaxootiga dadab ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa waxaa ka da,ay rooban xoogan kuwaasooy dadku ku diirsadeen.
inkastoo taas ay jirta hadana bulshada kudhaqan xeryaha qaxootiga dadab ayaa sheegay in roobabkan ay qasaaaro ugaysteen guryihii ay daganaayeen dadku.
lakiin dadka gobolka waqooyi bari oo wayadan abaaro ka cabanaayay ayaa soo dhaweeyay raxmada ebe swt.
roobabkan ayaa imaanaya xili gobolka waqooyi bari ay ka jireen abaaro ba,an.